စစ်သင်တန်းတက်ရောက်မှုများ ရှိနေ | ngalone
← UNHCR တည်း ဟူသော ထရိုဂျင် မြင်းရုပ်
ငခူရရွာ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား →
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်၌ တည်ရှိသော မောင်တောခရိုင်အတွင်း နေထိုင်သည့်
ဘင်္ဂါလီ အချို့သည် နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကို အကြောင်းပြ၍ ကုန်သည်အမည်ခံကာ
တစ်ဖက်နိုင်ငံ၌ စစ်သင်တန်း တက်ရောက်မှုများ ရှိနေကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်
အစိုးရအဖွဲ့ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး ၀န်ကြီး ဦးကျော်လွင်
အောက်တိုဘာ၂၉ရက် မွန်းလွဲ ၂နာရီ က ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌
ပြုလုပ်သည့် မောင်တောဒေသ လုံခြုံရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊
ပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဆိုင်ရာ
ကိစ္စများ နှင့်ပတ်သက်သည့် လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်အဝေးတွင် အထက်ပါအတိုင်း
“ကုန်သည်အမည်ခံပြီးတော့ ဟိုဖက်ကို ထွက်နေကြတာတွေ အများကြီးပါ။
ကုန်သည်အမှန်ကိုတော့ လက်ချိုးရေလို့ ရပါတယ်။ အခုတော့ လူဦးရေ ထောင်နဲ့
သောင်းနဲ့ ချီပြီးတော့ ပိုက်ဆံပေးရင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံကို ထွက်တယ်။
ပြီးတော့ သင်တန်းတက်တာတွေ ရှိတယ်။ ရက်တိုးပြီး နေရင်းနေရင်း နဲ့
ကျွန်တော်တို့ ဒေသတိုင်း ဒေသတိုင်းမှာ အကြမ်းဖက်သမားတွေ ပျံ့နံှ့နေတာတွေ
ရှိတယ်” ဟု ၄င်းကပြောသည်။
ကုန်သည်အမည်ခံ၍ တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ၀င်ထွက်သွားလာခွင့်
မပြုနိုင်ရန်အတွက်လည်း စိစစ်မှုများ ပြုလုပ်သွားရန် အစိုးရမှ
စီစဉ်လျက်ရှိပြီး၊ ၀န်ထမ်းများအနေဖြင့်လည်း ငွေကြေးတစ်ခုတည်းကိုသာ ကြည့်၍
လုပ်ဆောင်ရန် မသင့်ကြောင်း ၄င်း ကဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
This entry was posted in အထွေထွေ. Bookmark the permalink.	← UNHCR တည်း ဟူသော ထရိုဂျင် မြင်းရုပ်